I-Apple ilahlekelwa yinkantolo ngokumelene neMidlalo yama-Epic futhi umphumela usethe izibonelo | Kusuka kuLinux
Okuhle | 14/09/2021 19:43 | Kubuyekezwe ku- 14/09/2021 22:45 | Aplicaciones
Isikhathi esingaphezu konyaka odlule sabelana ngengxabano lapha kubhulogi lokho kudalwe phakathi kwe-Apple ne-Epic Games ngenxa yesizathu sokuthi owokugcina akhiphe isibuyekezo se-Fortnite Battle Royale lapho ivumela khona abadlali ukuthi bakhethe ukuthi bazokhokha kuphi futhi empeleni bakwazi ukushiya ikhomishini engu-30% edingwa yi-Apple.
Ngenxa yalokhu, i-Apple ekuqaleni isuse uhlelo lokusebenza esitolo sayo sokufaka isicelo, okwaholela enkantolo yi-Epic Games esola i-Apple ngokuzimela nokuthi kamuva onjiniyela abahlukahlukene abazimele kanye nabathuthukisi abadumile bajoyina imbangela.
Ekuqaleni izinto zazingabukeki zithandeka kuma-Epic Games, kepha kubonakala sengathi lesi senzo abaningi abasithatha njengesokuzibulala sibe nemiphumela ebeke isibonelo sendlela izinto ezazisingathwa ngayo.
Futhi yilokho IJaji u-Yvonne González Rogers usanda kukhipha incwadi evimba icala le-Epic vs. Apple NgoLwesihlanu, ebeka imikhawulo emisha emithethweni ye-Apple App Store nasezinyangeni zokuphela kwengxabano yomthetho ebabayo.
Njengengxenye yomyalelo wenkantolo omusha, I-Apple ine-oda lokuvimbela unomphela
«Lokho kuvimbela abathuthukisi ukuthi bangafaki ezinhlelweni zabo kanye nemethadatha yezinkinobho zabo, izixhumanisi zangaphandle noma ezinye izingcingo zokwenza isenzo esiqondisa amakhasimende ezindleleni zokuthenga, ngaphezu kokuthenga ngaphakathi nohlelo kanye nokuxhumana namakhasimende ngokusebenzisa izindawo zokuxhumana ezitholwe ngokuzithandela kumakhasimende ngokubhalisa i-akhawunti esicelweni ”.
Ngokufingqa, Izinhlelo zokusebenza ze-iOS kufanele zikwazi ukuqondisa abasebenzisi kuzinketho zokukhokha ngaphezu kwalokho okunikezwa yi-Apple. Umyalelo kulindeleke ukuthi uqale ukusebenza ezinsukwini ezingama-90, ngoDisemba 9, ngaphandle kokuthi inkantolo ephakeme yenze isinqumo esehlukile.
Kungenzeka ukuthi ngaleso sikhathi, umkhiqizo omkhulu we-electronics Isikhalazo sokuphikisana neziphetho zesigwebo. Amakhomishini akhokhiswa yi-Apple ngohlelo lwawo lwangaphakathi nohlelo angumthombo wemali eqenjini, ngoba afinyelela ku-15 noma ku-30% wenani lokuthengiwe.
Kwesinye isinqumo, inkantolo yathi imidlalo yama-Epic yephule isivumelwano sayo ne-Apple ngenkathi isebenzisa enye indlela yokukhokha kuhlelo lokusebenza lweFortnite. Ngenxa yalokhu, i-Epic kufanele ikhokhele i-Apple 30% yayo yonke imali eqoqwe ngohlelo selokhu yasungulwa, engaphezulu kwezigidi ezingama- $ 3,5.
Ngemuva kwalokhu kunqoba kwe-Epic, imiphumela yakhona yashesha: NgoLwesihlanu, amasheya akwa-Apple ahlupheke kakhulu ezinyangeni. Isitoko sehle ngo-3,3%, ukwehla okukhulu kunakho konke kusukela ngoMeyi 4, kuphoqa ukuthi izimali zabenzi be-iPhone zifike ku- $ 85.000 billion.
Abahlaziyi bathe yize lesi sinyathelo sinamandla okuthinta imali engenayo yesevisi yakwa-Apple, umshayeli omkhulu wokukhula eminyakeni yamuva nje, imiphumela yokwehla kwamandla omsebenzi ibingakacaci, izobekelwa isikhathi, futhi ngeke imele eyodwa kuphela. .
Empeleni, I-Epic kubonakala sengathi ikuthole ebikufuna: amandla okunikela ngohlelo lwayo lokukhokha ukugwema ikhomishini engama-30% ekhokhiswa yi-Apple.
Eqinisweni, I-Apple ayisakwazi ukuvimbela abanikazi be-iPhone ekusebenziseni uhlelo lwayo lokukhokha (okungaba yinkinga kumodeli yebhizinisi ye-App Store), kepha ubulungiswa abuzange buhambisane nezinsolo zokuzimela nokuziphatha okuphikisana nokuncintisana. Ngaphezu kwalokho, i-Epic nayo iyalelwe ukuthi ikhokhe i-Apple ngokufaka uhlelo lwayo lokukhokha kunguqulo ye-iOS yeFortnite.
Noma Imidlalo yama-Epic isavinjelwe esitolo sohlelo lokusebenza Futhi, ngokwesinqumo senkantolo, u-Apple unelungelo lokugcina umshicileli womdlalo kude nesikhulumi sawo. Ngakho-ke, i-Epic ilwele ilungelo labanye onjiniyela lokunikeza ezinye izindlela zokukhokha, kepha ngeke ukwazi ukuzisebenzisa ngokwakho.
I-Apple ithembele ikakhulukazi kubathuthukisi abakhulu abanjengo-Epic, abanenzuzo eyanele yokukhokha amakhomishini angama-30% futhi bakhiqize iningi lemali engenayo evela ku-App Store.
Okubalulekile, umyalo wenkantolo awukhawulelwe kumageyimu noma izinkokhelo ezingaphakathi nohlelo, ngakho-ke akucaci ukuthi iyiphi ingxenye yesisekelo sonjiniyela ezoshiya uhlelo lokukhokha lwe-Apple. Uma lokhu kwenzeka, i-Apple ingaphoqeleka ukuthi ishiye unomphela uhlelo lwekhomishini.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » I-Apple ilahlekelwa yinkantolo ngokumelene neMidlalo yama-Epic futhi umphumela usethe izibonelo
UJose Pepe kusho
Uyitholile emuva ngokuphelele, "ikuphonse" eziphethweni ezingamanga ...
Phendula uJosé Pepe
Yini i- $ 4,5 million ye-Epic? Akunalutho, yilokho abakukhiqizayo ngomzuzu.
Bengilokhu ngilandela isiza iminyaka, kepha lezi zindaba zikhombisa ukungaqondi ngokusobala ukuthi empeleni ijaji ligwebe ini. Sicela ubuyekeze imininingwane bese uhlola kabili ngaphambi kokuthumela umbhedo. Sanibonani.
Ilungele inkululeko, kubi ngeLinux ukuthi bathathe umhlalaphansi eRocket Rock futhi abanandaba nesabelo seFortnite.